Serivisy fisandohana - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Precision Forging Service-Mpanamboatra faritra mora vidy China
Amin'ny maha-orinasa mpamokatra milina terminal azy, OuZhan dia manana loharanom-pahalalana marobe amin'ny famolavolana mpanamboatra manana fiaraha-miasa matotra. Ny ampahany sandoka dia matetika mila foronina amin'ny hafanana ambony mba hamoronana banga, ary avy eo alefa any amin'ny ozinina fanodinantsika ho an'ny fanodinana farany. Noho izany, amin'ny maha-mpanamboatra matanjaka manana traikefa am-polotaona maro ao amin'ny indostrian'ny fanodinana mekanika, dia tsy vitan'ny hoe mahafantatra ny fizotry ny famaranana isan-karazany isika, fa manana ny fahatakarana tsara ny rohy famokarana samihafa sy ny fizotran'ny teknolojia any amin'ireo orinasan-tsika any ambany, izany hoe , ilay mpanamboatra forging parts.
Ka rehefa mila serivisy fisandohana ianao dia afaka mitady trano fanaovana forging mivantana, fa ny safidy tsara kokoa dia ny mitady trano fikirakirana mekanika terminal. Mila mandefa ny sary ny vokatrao fotsiny ianao, ary hanampy anao matetika izy ireo hahita orinasa fananganana kalitao tsara, hampiasa ny traikefa niainany nandritra ny taona maro handaminana ny fizotran'ny fikirakirana sy ny fomba fanao rehetra ho anao. Ny hany mila ataonao dia ny miandry ny fandefasana ny vokatra vita, fa tsy mitady orinasa misandoka ary avy eo ny orinasa mpanamboatra milina, izay hamonjy fotoana sy hery be dia be aminao.
Ouzhan Precision Forging fahaiza-manao sy ny endri-javatra:
Na inona na inona toe-javatra misy, ny fanaovana ny kalitao lalandava indrindra ary tsy amin'ny toe-javatra mety hanimba ny kalitaontsika no fananganana lehibe indrindra ao Ouzhan.
• Fanamboarana ny serivisy. Satria tsy dia mahazatra ny mpanjifa ny fametahana, rehefa nahazo ny sarin'izy ireo izahay dia nahita fa tsy azo atao fametahana ilay volavola, ary ny ekipan'ny injenierantsika dia hamolavola ireo ampahany amin'ny teknolojia fanaovan-tsonia. Ny fepetra mety hafa dia ny tsy fahafahan'ny mpanjifa mampiasa CAD hisarihana vokatra, fa manonta azy ireo amin'ny tanana, tsy mila fandeferana, fa misy refy lehibe ihany. Amin'ity tranga ity, izahay dia hanome sary ara-teknika matihanina miaraka amin'ny marika fandeferana amin'ny ankapobeny.
• Fampivoarana ny bobongolo. Bobongolo fanamboarana kalitao avo lenta no vinan'ny famokarana faritra avo lenta. Iray amin'ireo tombony azo tsapain-tanana fa manana ny fitaovantsika manokana sy ny fivarotana maty izahay ary ny forging dies rehetra dia noforonina ary novolavolaintsika.
• Mikatona maty forging. Ny fizotran'ny orinasa mpiara-miasa aminay dia famonoana maty mihidy, noho izany dia manolo-tena hamokatra famonoana vy kely sy famonoana aluminium izahay. Amin'ny fampiasana milina fanoratana avy amin'ny 300 taonina ka hatramin'ny 2500 taonina dia afaka manome famelana 0,2kg-50kg izahay.
• Famaranana marina. Indraindray, ny fametahana dia tsy afaka mahatratra ny refy farany na fandeferana amin'ny tapany farany. Amin'ity tranga ity dia hitahiry fandeferana sasantsasany isika rehefa misandoka, ary avy eo manao milina mazava tsara. Ny asa fanodinana toy izany dia hanome ny mpanjifanay ampahany marina kokoa.
• Fitsaboana hafanana sy etona. Mba hanatsarana ny fananan'ny vokatra, toy ny hamafin, ny fitsaboana hafanana dia hatao aorian'ny fametahana. Ny orinasanay dia afaka manome serivisy fitsaboana hafanana amin'ny fangatahana, afaka manome serivisy fitsaboana isan-karazany koa izahay, toy ny hosodoko, fanamafisana, sns.
• Fitsapana tsy manimba. Ho an'ny fametahana tsirairay dia hanao fitiliana tsy manimba izahay alohan'ny fanaterana hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra.
• Serivisy fonosana manokana. Afaka manome serivisy fonosana namboarina izahay, mila manome vaovao fampahalalana ilaina fotsiny.
Maninona no mifidy Ouzhan Forging Services
1. Taona niainana tamin'ny milina
Ouzhan dia manam-pahaizana manokana momba ny milina CNC nandritra ny am-polony taona maro, tsara toerana izahay hiara-hiasa amin'ny orinasa mpamokatra entana ary hainay tsara ny fomba sy ny lamina isan-karazany amin'ny fanaovana hosoka.
Manam-pahaizana manokana momba ny fihodinana, ny fikosoham-bary, ny fanodinana, ny fandavahana, ny fihodinan'ny CNC ary ny fikosoham-bary i Ouzhan, mba hahafahanao mahazo karazana serivisy fanodinana milina mazava tsara ho an'ireo faritra forging avy amin'ny ekipa atokisana.
Manana injeniera 10 ao amin'ny ivon'ny R&D izahay, dokotera na profesora avy ao amin'ny University of Science and Technology of China avokoa izy rehetra. Azontsika atao ny manolotra serivisy famolavolana sy famolavolana matihanina indrindra.
Manana mpiasa sy fitaovana fanaraha-maso kalitao matihanina izahay, araka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny vokatra hozahanay, ary mamoaka tatitra momba ny fitsapana amin'ny antsipiriany ho an'ny faritra misandoka ho an'ny mpanjifa.
Misy habe sy endriny namboarina. Tongasoa eto amintsika hizara ny sary 2D na 3D an'ny faritra forging anao, andao hiara-hiasa mba hamorona kokoa ny fiainana.
Inona no atao hoe fanompoana sandoka ary ahoana no fomba fiasa
Amin'ny dingan'ny fanaovana hosoka, ny vy dia miforona amin'ny alàlan'ny fanindriana, fikapohana, na fivoahana amin'ny tsindry mafy be hamorona faritra antsoina hoe fametahana. Saika ny metaly rehetra dia azo foroka, ao anatin'izany ny karbaona, ny alloys ary ny vy vy, ny aliminioma, ny titanium, ny varahina, ny varahina, sns. Ny metaly dia nafanaina alohan'ny fizotran'ny serivisy fanaovana hosoka, saingy tsy voalefaka tahaka ny fizotran'ny fanariana izany. Misy karazany maro ny fizotran'ny fanaovana hosoka, ao anatin'izany ny fisandohana mangatsiaka na ny fisandohan-doha, ny famonoana maty (mihidy maty), ny fisokafan'ny maty ary ny fametahana peratra mihodina. Ny karazana serivisy fanaovana hosoka voafantina dia miankina amin'ny vy hamboarina sy ny endrika, habe ary fitaovana amin'ny vokatra farany.
Amin'ny fametahana mangatsiaka, ny metaly voarindra dia tsy afanaina mivantana. Fa kosa, miorina amin'ny tsindry mafy be izy io. Ity dingana ity dia mahatonga ny haben'ny vokatra ho marina amin'ny endrika farany. Matetika izy io dia ampiasaina hamoronana ampahany kely toy ny fasteners. Na dia lehibe aza ny hery takiana amin'ny famolavolana vy, satria tsy ilaina ny fanafanana, kely ny angovo ilaina amin'ny famolavolana zavatra mampiasa ity fizotrany ity. Ireo lahatsoratra nomanin'ity fomba ity dia matanjaka amin'ny ankapobeny satria ny fanafanana dia tsy mampihena ny tanjaka sy ny tsy fitovizan'ny metaly.
Ny fanaovana forging for impression dia tolotra fanaovana hosoka mahazatra indrindra. Amin'ny forging maty, apetraka eo anelanelan'ny maty roa ny fitaovana vy. Rehefa manakaiky ny bobongolo dia miova endrika ny plastika mandra-pahatongan'ny sisiny mihalehibe amin'ny sisin-dafin'ny lasitra. Amin'ity fizotrany ity, satria misy metaly metaly mandehandeha avy eo amin'ny workpiece mivoaka mankamin'ny ivelan'ny indentation bobongolo, dia miforona ny flash. Rehefa mangatsiaka ny tselatra dia manome ny fanoherana ny fiovana amin'ny endriny ilay izy, ary manatsara ny tanjaky ny vokatra farany. Izany dia miteraka tsindry ao amin'ny ankamaroan'ny faritra ary manampy ny fikorianan'ny fitaovana ao anaty fonenana tsy feno.
Amin'ny fisoratana anarana ho an'ny maty misokatra dia tsy manarona tanteraka ilay sangan'asa ilay maty. Fa kosa, misy toerana malalaka misokatra izay mamela ny lafin-javatra rehetra hiasa hifindra avy amin'ny fifandraisana lasitra mafana mivantana mankany amin'ireo faritra malalaka mangatsiaka kokoa. Mandritra ny serivisy misokatra for open die, ny workpiece vy dia hafanaina ambonin'ilay mari-pana fanarenana azy, ary avy eo manomboka ny fizotran'ny famolavolana. Mandritra ny fizotrany rehetra dia afindra ny sangan'asa mba hamboarina ny lafin-javatra rehetra. Rehefa mihetsiketsika sy miverina mametaka ny sangan'asa, ny faritra ao amin'ny faritra malalaka dia hangatsiaka eo ambanin'ny mari-pamantarana vy, ary avy eo averina averina raha mitohy ny fitetezana.
Ny fihodinanan'ny peratra dia misy ny fanafanana ny vy vy amin'ny mari-pana. Ny preform dia apetraka ao anaty fikosoham-bary anatiny. Rehefa apetraka amin'ny rindrin'ny kalandrie ny tsindry, ny endrika mialoha dia manomboka miendrika endrika varingarina na anular. Rehefa mihitatra ny refy anatiny sy ivelany amin'ireo serivisy fanaovana hosoka ireo dia mihena ny faritra ampitan'ny faritra.
Fitaovana fanoratana - Fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana hosoka
Ny fitaovana malemy dia tsy mety amin'ny forging. Ireo fitaovana misy plastika tsara sy faritra plastika lehibe kokoa dia mety amin'ny forging, toy ny vy karbonika, vy vy, ary metaly tsy ferrous sasany toy ny alimo, aliminioma, ary magnesium.
Ouzhan Forging Surface vita